Izindaba - I-FAQ yomhloli wokumelana nokuvikela
Isihloli sokumelana nokuvikela kufanelekile ukukala inani lokumelana nezinto ezahlukahlukene zokuvikela nokuqina kokumelana nama-transformer, izinjini, izintambo nemishini kagesi ukuqinisekisa ukuthi le mishini, izinto zikagesi kanye nolayini basebenza ngendlela ejwayelekile futhi bagwema izingozi ezinjengokushaqeka kukagesi ukulimala kanye nokulimala kwemishini.
Izinkinga ezijwayelekile zomhloli wokumelana nokuvikela zimi kanje:
1. Lapho ulinganisa ukumelana nomthwalo we-capacitive, buyini ubudlelwane phakathi kokukhishwa kwesikhashana kwesekhethi sokuhlola ukumelana nomshini nedatha elinganisiwe, futhi ngani?
Okwamanje okukhishwa kwesikhashana kwesivivinyo sokuvikela ukumelana kungakhombisa ukumelana kwangaphakathi komthombo wamandla aphezulu.
Izinto eziningi zokuhlolwa kwe-insulation ziyimithwalo ye-capacitive, njengezintambo ezinde, ama-motors anama-windings amaningi, ama-transformer, njll. Ngakho-ke, lapho into elinganisiwe inamandla, ekuqaleni kwenqubo yokuhlola, umthombo wamandla aphezulu kumhloli wokumelana nokuvikela kufanele akhokhise i-capacitor ngokumelana kwayo kwangaphakathi, futhi kancane kancane ishaja i-voltage kokukhiphayo okulinganiselwe inani lamandla aphezulu womhloli wokuvikela ukumelana. Uma inani le-capacitance yento elinganisiwe likhulu, noma ukumelana kwangaphakathi komthombo wamandla aphezulu kukhulu, inqubo yokushaja izothatha isikhathi eside.
Ubude baso bunganqunywa ngomkhiqizo we-R no-C umthwalo (ngemizuzwana), okusho ukuthi t = R * C umthwalo.
Ngakho-ke, ngesikhathi sokuhlolwa, umthwalo we-capacitive udinga ukukhokhiswa kumthamo wokuhlola, futhi ijubane lokushaja i-DV / DT lilingana nenani lokushaja i-I yamanje kanye nomthwalo we-capacitance C. Leyo yi-DV / dt = I / C.
Ngakho-ke, okuncane ukumelana kwangaphakathi, kukhulu manje ukushaja, futhi umphumela wokuhlola uyashesha futhi uzinze.
2. Uyini umsebenzi wokuphela kwethuluzi u “g”? Endaweni yokuhlola yamandla aphezulu nokumelana okuphezulu, kungani insimbi ixhunywe esigungwini se- "g"?
Ukuphela kwe- “g” kwensimbi kuyisikhungo sokuvikela, esisetshenziselwa ukuqeda umthelela womswakama nokungcola endaweni yokuhlola emiphumeleni yokukala. Ukuphela kwe- “g” kwensimbi ukweqa ukuvuza okukhona ebusweni bento evivinyiwe, ukuze amandla okuvuza angadluli emjikelezweni wokuhlola wensimbi, kususwe iphutha elidalwe yimanje lokuvuza. Lapho uvivinya inani eliphakeme lokumelana, ukuphela kwe-G kudinga ukusetshenziswa.
Ngokuvamile, i-g-terminal ingabhekwa lapho iphakeme kune-10g. Kodwa-ke, lolu hlu lokumelana aluphelele. Ihlanzekile futhi yomile, futhi ivolumu yento ezolinganiswa incane, ngakho-ke ingazinza ngaphandle kokulinganisa i-500g ekugcineni; Endaweni emanzi nengcolile, ukumelana okuphansi futhi kudinga ukuphela kwe-g. Ngokuqondile, uma kutholakala ukuthi umphumela kunzima ukuzinza lapho ulinganisa ukumelana okuphezulu, i-g-terminal ingabhekwa. Ngaphezu kwalokho, kufanele kuqashelwe ukuthi i-terminal yokuvikela i-G ayixhunywanga kusendlalelo sokuvikela, kepha ixhunywe ku-insulator phakathi kwe-L ne-E, noma ku-multi strand wire, hhayi kwezinye izintambo ezingaphansi kokuhlolwa.
3. Kungani kudinga ukukala hhayi ukumelana okumsulwa kuphela, kepha futhi nenani lokumunca nenkomba yokuhlukanisa lapho ulinganisa ukwahlukanisa?
I-PI yinkomba ye-polarization, ebhekisa ekuqhathanisweni kokumelana nokuqina ngemizuzu eyi-10 neminithi eli-1 ngesikhathi sokuhlolwa kwe-insulation;
I-DAR isilinganiso sokumunca i-dielectric, esibhekisa ekuqhathaniseni phakathi kokumelana nokuqina ngeminithi elilodwa nokuthi kuma-15s;
Ekuhlolweni kwe-insulation, inani lokumelana ne-insulation ngesikhathi esithile alikwazi ukukhombisa ngokuphelele ikhwalithi yokusebenza kokufakwa kwento yokuhlola. Lokhu kungenxa yezizathu ezimbili ezilandelayo: ngakolunye uhlangothi, ukumelana nokwakheka kwezinto ezifanayo zokwenziwa kokusebenza kuncane lapho ivolumu inkulu, futhi inkulu lapho ivolumu incane. Ngakolunye uhlangothi, kunezinqubo zokukhokhiswa kokushaja nezinqubo zokuhlukaniswa kwezinto ekuvikeleni izinto lapho kusetshenziswa amandla aphezulu. Ngakho-ke, uhlelo lwamandla ludinga ukuthi isilinganiso sokumunca (ama-r60s kuye kuma-r15s) kanye nenkomba ye-polarization (r10min kuya ku-r1min) kufanele ilinganiswe esivivinyweni sokufakwa kwe-transformer enkulu, ikhebula, imoto nezinye izikhathi eziningi, futhi isimo sokuhlukanisa singahlulelwa le datha.
4. Kungani amabhethri amaningi we-elektroniki wokumelana nomhloli wokuhlola ekhiqiza amandla aphezulu we-DC? Lokhu kusekelwe kumgomo wokuguqulwa kweDC. Ngemuva kokucutshungulwa kwesekethe yokuqinisa, i-voltage ephansi yokuphakela iphakanyiselwa kumandla aphezulu we-DC voltage. Yize i-voltage ephezulu ekhiqiziwe iphezulu, amandla okukhipha mancane (amandla aphansi namandla wamanje amancane).
Qaphela: noma ngabe amandla amancane kakhulu, akunconywa ukuthinta iphenyo lokuhlola, kusazobakhona ukuhayiza.
Imininingwane © 2021 Shenzhen Meiruike Electronic Technology Co., Ltd. Imikhiqizo Okufakiwe, Ibalazwe, Imitha yeDigital High Voltage, Imitha Yokulinganisa Ephakeme Ye-Voltage, Imitha ephezulu yeVoltage, Imitha eyi-1000v- 40kv Digital, I-High-Voltage Digital Meter, Imitha yeVoltage, Yonke Imikhiqizo